Ataovy mandeha tsara ny faktioranao amin'ny fitantanan-trano
Ny fotoana laniana amin'ny fifanakalozana ara-bola dia mamorona ampahany betsaka amin'ny fotoana fitantanan-draharahan'ny fitantanana. Ankoatry ny fanangonana ny vola fandoavam-bola sy fiarovana, ny mpampiantrano dia takiana ihany koa amin'ny famoahana faktiora ho an'ny vahiny, ary ny karazany sy ny atin'ny faktiora dia azo atao miovaova arakaraka ny antsipirian'ny famandrihana tsirairay avy.
Na dia mamela anao hamorona faktiora ho an'ny famandrihana aza ny rafitra fitantanana fananana sasany, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mandray ampaham-bola azo amidy amin'ny vahiny, na dia vitsy kokoa aza ny fifampiraharahana amin'ny tahiry fiarovana izay farany tazomina, ary manakaiky ny tolotra tokana ny vahiny dia safidinao manokana handefasana faktiora amin'ny fotoana fandoavam-bola.
Ahoana no ahafahan'ny faktioran'i Zeevou manampy?
Zeevou dia mamela anao mandeha ho azy faktiora ho an'ny vahiny. Ankoatry ny fanampiana anao amin'ny faktiora ny vahininao noho ny fijanonany dia afaka mivarotra ihany koa ianao hametraka-ons ho an'ny vahiny amin'ny alàlan'i Zeevou, manangona fandoavam-bola ho an'ireo via Rohy azo antoka 3-D, ary asaivo ampidirina ho azy ao amin'ny faktioran'ny famandrihana ho toy ny entana andalana fanampiny.
Tokony hampanginao vahiny ve ianao manohitra ny petra-bola fiarovana natao ho famandrihana, Zeevou dia hampiditra azy io amin'ny faktiora farany azy ireo. Ny faktiora navoakan'ny rafitray dia marika fotsy, toy izany koa ianao marika ao anaty kaonty, noho izany dia hiorina amin'ny paleta milokoo izy ireo ary hampiditra ny sary famantarana anao. Ny faktiora tsy voaloa dia azo apetraka mba hampidirana ny antsipirian'ny banky momba ny fandoavam-bola, ary / na ny bokotra Pay Now izay mifandray mivantana amin'ny anao Integrated vavahady fandoavam-bola.
Mamoaka faktiora faktiora ny rafitra raha vantany vao tonga eo amin'ireo mpizara anay ny famandrihana. Ny vahiny dia afaka misintona an'io amin'ny fotoana fandoavambola. Azonao atao koa ny mampiditra an'io ho toy ny firaiketam-po amin'ny a mailaka mandeha ho azy, hahafahanao mahazo antoka fa tsy manana antony hifandraisana aminao ny vahiny hangataka faktiora halefa aminy tanana.
Raha vantany vao voamarika ho mpitsidika ny vahiny dia afaka manome faktiora farany ho an'ny vahiny. Amin'ny lafiny bookkeeping, ity dia handray an-tsipiriany ny fantsona niavian'ny famandrihana (sy ny vidiny mifandraika amin'izany) ary koa ny fifampiraharahana ho an'ny mpampiasa vola nanendrena azy tany Zeevou (hamela automatisation ny real-time fanambaràn'ny tompony).
Ankoatra ny faktiora ara-dalàna dia manolotra ihany koa i Zeevou fitokisana ary faktiora proxy (ho an'ireo izay mitantana trano fanofana fialan-tsasatra amin'ny anaran'ny tompony ohatra). Ho an'ny mpanjifa monina any EU, Zeevou dia mirehareha ihany koa mampiseho ny fahaizany fakana vola tokana TOMS. Mba hamaranana azy rehetra, ny fampidirana an'i Zeevou miaraka Xero mamela izany faktiora rehetra izany koa halefa any amin'ny rafitry ny kaonty ka hampihena be ny fividianana boky, manampy anao hitady tombony.
Mangataha DEMO amin'izao andro izao!